Curtains miloko marevaka - Linen Look Semi Sheer polyester 8294 lamba firakotra, China Color Block sheer Curtains - Linen Look Semi Sheer polyester 8294 pirinty Curtain Manufacturer, mpamatsy, Factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Ny haben'ny fanontam-pirintinay dia mety amin'ny ankamaroan'ny varavarankely ary mora apetraka amin'ny segondra. Ireo semi-sheer dia mifanaraka amin'ny karazana haingo manazava ny efitrano misy endrika mahafinaritra sy mahazatra. Fanampiny tonga lafatra ao amin'ny efitrano fandriana, akanin-jaza, efitrano fandraisam-bahiny sy maro hafa. sivana avy any ivelany ny famirapiratra ary avelao hazavana kely sy rivotra madio amin'ny varavarankely.
FABRIKA MAFY MITSY MITSY
PREMIUM FABRIC: Polyester tsara kalitao 100%. Ny habetsaky ny firakotra somary manolotra dia malefaka amin'ny hoditra. Raha mijery tsara tarehy sy kanto izy ireo, dia tsy misy lamba firakotra manify fotsiny, izay tadiavinao ihany. Ny Curtain lamaody dia tena malefaka sy sariaka amin'ny tontolo iainana izay misy fikorianan-javatra voajanahary amin'izy ireo - tsy henjana mihitsy. Tsara amin'ny layering.